Kitra: miofana ireo mpanofana mpitsara - ewa.mg
Kitra: miofana ireo mpanofana mpitsara
News - Kitra: miofana ireo mpanofana mpitsara
mpitsara baolina kitra iraisam-piernena, niditra amin’ny anjara
fiofanany ihany koa ireo mpanofana mpitsara (instructeur).
Nanomboka ny zoma lasa teo izany ary nifarana omaly alatsinainy.
Noho ny mbola fisian’ny valanaretina Covid-19, fiofanana
ampitain-davitra ny natao. Mahatratra 34 mianadahy mianaka ireo
mpanofana mpitsara ireo ka nanana solontena tamin’izany avokoa ireo
ligim-paritra 22 mandrafitra ny federasiona malagasy ny baolina
kitra (FMF). Nitarika izany ireo manampahaizana avy amin’ny
federasiona iraisam-pirenena (Fifa), tantanin’ny talen’ny
fiofanana, i Atganase Nkutibo. Manampy azy i Celestin Ntanguira,
misahana ny lafiny teknika. Eo koa i Hanachi Boubacar, manofana ny
tanjaky ny vatana. Mpandrindra ankapobeny kosa Andrianantenaina
Pascal. Tamin’ny alalan’ny fijerena “video” misy ampahan-dalao no
nanaovana ny fampianarana ka nampandraisana anjara ny tsirairay.
Samy mitondra ny fomba fahitany sy ny fanazavany ny zavatra hitany
ireo mpiofana isanisany. Misy hatrany ny firesahana ireo lalàna
mifehy ny lalao sy ny pitsompitsony. Faranana amin’ny fanadinana
kely ny fiofanana.
Manoro sy manitsy ny fomba
fitantanan’ireo mpitsara any amin’ireo ligim-paritra misy azy avy
ireo mpiofana aorian’izao fandrantoana fahalalana izao ka afaka
manome naoty azy ireo. Tsiahivina fa efa tamin’ny taona 2014 no
nisian’ny fiofanana farany ho an’ny “instructeur” eto
L’article Kitra: miofana ireo mpanofana mpitsara a été récupéré chez Newsmada.
Jly Ravalomanana Richard: “Zandary 120 mitondra tsimokaretina Covid-19”
Araka ny antontanisa nomen’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, miisa 120 ireo zandary mitondra ny tsimokaretina Covid-19. Ankoatra ireo ny any amin’ny sekolin’ny zandarimaria any Ambositra sy Moramanga.“Fanentanana ataoko ny hoe araho ny fepetra noraisina ary aza ny fahatahorana ny mpitandro filaminana no hanarahana ny fepetra fa ho anareo sy ny olona manodidina anao izany. Tsy misy miova ny fepetra fa rehefa miteny ny any amin’ny fanjakana foibe hoe tsy misy mahazo mivoaka ao amin’ny faritra iray, tsy misy mahazo mivoaka”, hoy ny fanazavan’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zan­da­ri­mariam-pirenena (Seg), ny Jly Ravalomanana Richard, mo­mba ny fihanaky ny valanaretina Coronavirus. Noha­ma­fi­siny fa manatanteraka fotsiny ny zandarimariam-pirenena ary manentana ny olona tsirairay avy koa ity manamboninahitra ambony ity mba ho tonga saina amin’izay amin’izao fihanaky ny valanaretina izao. Azo resena tsara ny Coro­na­virus rehefa manaraka ny toromarika sy ny lamina napetraka ny vahoaka tsirairay avy, araka ny nambarany.Nifanome tanana ny fianakaviamben’ny zandarimaria… Nanome antontanisa ma­no­­kana ny Seg momba ireo zan­dary tratran’ny Covid-19. Ho an’ny zandarimariam-pirenena manokana, miisa 120 amin’ny ankapobeny ireo tratran’ny Coronavirus. “Ho an’ny sekolin’ny zandarimaria any Ambositra kosa, miisa 323 ireo mitondra ny tsimokaretina raha 144 no tratra ao amin’ny sekoly ambonin’ny zandarimariam-pirenena ao Mora­ma­n­ga. Efa an-dalam-pahasitranana avokoa ireo zandary ireo ary misaotra ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka tamin’ny fanampiana rehetra”, hoy izy. Nifanome tanana, ara­ka izany, ny fianakaviamben’ny zandarimariam-pirenena tamin’ny famonjena ireo tratran’ny Covid-19 ary tsy misy atahorana intsony ireo zandary voan’ity aretina ity. Nisy teo am-panatanterahana ny asany ny nahazoany ny aretina, nisy kosa nandritra ny fankalazana ny fetin’ny 26 jona lasa teo. Misy ny tandrevaka kely satria nifandray tamin’ny fianakaviany ny sasany amin’izy ireo, raha ny filazany.J.CL’article Jly Ravalomanana Richard: “Zandary 120 mitondra tsimokaretina Covid-19” a été récupéré chez Newsmada.
Mbola nitohy, omaly, teny amin’ny Bianco Ambohibao ny fakana am-bavany an’i Mbola Rajaonah. Voalaza fa io omaly io no farany tamin’ny fakàna am-bavany azy eny amin’ny Bianco, araka ny fanazavan’ny mpisolovava. Olana tamin’ny fampidirana entana tany amin’ny Fadintseranana no maha voarohirohy azy. L’article Antso mitohy est apparu en premier sur AoRaha.
Kitra vehivavy – «Cosafa cup»: nihintsana ny Barean’i Madagasikara
Tapitra hatreo ny lalan’ny Barean’i Madagasikara, sokajy vehivavy, eo amin’ny fiadiana ny «Cosafa cup 2019», taranja baolina kitra. Fihaonana, tanterahina atsy Afrika Atsimo. Resin’i Afrika Atsimo, mpampiantrano, tamin’ny isa mazava, 3 no ho 0, mantsy ny Malagasy, teo amin’ny lalao farany, omaly alatsinainy, tamin’ny fifanintsanana ho an’ny vondrona A.Manana isa 9 ny Afrikanina Tatsimo, nandresy intelo tao anatin’ny lalao nataony. Fandresena iray sy faharesena indroa misesy kosa ny azon’ny Barean’i Madagasikara, tsy manana afa-tsy isa telo ihany. Tsy ampy niakaran’ny Barea, amin’ny manasa-dalana, io vokatra azony io.Raha tsiahivina ny vokatra azon’ny Barea, tamin’ity “Cosafa cup 2019” ity, resin’i Malawi, tamin’ny isa 2 no ho 0, teo amin’ny lalao voalohany ary nandresy an’i Kaomoro, tamin’ny isa, 5 no ho 1, teo amin’ny fihaonana faharoa, ary izao resin’i Afrika Atsimo, tamin’ny isa 3 no ho 0 izao, indray. TompondakaL’article Kitra vehivavy – «Cosafa cup»: nihintsana ny Barean’i Madagasikara a été récupéré chez Newsmada.
Mpanohana ny Barea: 471 mianadahy mianaka hihazo any Egypta, anio alina
Araka ny fantatra, omaly, nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety, hanainga, anio alina ilay fiaramanidina A380 hitondra azy 471 mianadahy mianakana, hanatrika ny lalao hatrehin’ny Barea, ny alahady izao, any Ejypta.Nambaran-dRakotomanga Rinah, tale misahana ny serasera eo anivon’ny prezidansa, tamin’ny mpanao gazety, omaly fa 471 no isan’ny olona, handeha ho any Egypta, hanohana ny Barea de Madagascar, amin’ny lalao ampahavalon-dalana, hiadiana ny “Can 2019”, ny alahady ho avy izao.Fiaramanidina manokana A380, hofaina amin’ny kaompania Air Madagascar, no hitondra azy ireo, miaraka amin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Efa feno tanteraka ny toerana, amin’izany ka Malagasy avokoa izy ireo, ary ny ankamaroany sambany vao hitaingina fiaramanidina.Nomarihin-dRazafimaharo Besoa, tale jeneralin’ny Air Madagascar fa hiala eto Madagascar io fiaramanidina io, anio asabotsy amin’ny 12 ora alina ary ho tonga any Egypta ny alahady maraina amin’ny 6 ora. Hiainga any indray rehefa vita ny baolina, ny alahady amin’ny 12 ora alina ary higadona eto an-tanindrazana, ny alatsinainy amin’ny 7 ora sy sasany, maraina.Nambaran’i Rinah, fa tsy mahazo mitondra valizy ny mpandeha fa kitapo tsotra. Efa samy nanao fanekena amin’ny fiverenana avokoa ireo mpandeha rehetra. Noho ny pitsompitsony ara-teknika, nofoanana ilay fiaramanidina faharoa, saika hofaina, na maro aza ireo olona te handeha.Ankoatra ireo mpijery nandoa vola, olona 50 hafa nahazo fanasana manokana, toy ireo ankizy eny amin’ny père Pedro sy ny Zazakanto ary ireo mpilalao kalaza fahiny, sy vadin’ny mpilalao iray. Hitondra mpitsoka mozika, ihany koa ny fitondram-panjakana, amin’ity dia ho any Egypta, ity. Tsy maintsy miverina mody avokoa ireo mpijery rehetra, rehefa vita ny lalao. Mbola hisy kosa ny sidina manokana, raha tafita amin’ny ampahefa-dalana, ny Barea, amin’io vidiny 2.200.000 Ar, io.TompondakaL’article Mpanohana ny Barea: 471 mianadahy mianaka hihazo any Egypta, anio alina a été récupéré chez Newsmada.
Stephanie: « Clip » mialohan’ny fandehanana any ivelany
Mpanakanto manana ny laza iraisam-pirenena ! Raha ny fandaharam-potoan’i Stéphanie, hanatanteraka fitetezana an’i Eoropa izy, amin’ny volana desambra izao. Mialohan’io diany io, hanatontosa rindrantsary (clip) maromaro ity mpihira manana ny maha izy azy ity. Amin’ito herinandro ito, hivoaka ny « Raosy jamba », izay manana ny gadona afro-dance. Hira mitantara ny kilalao malagasy fahiny. Afaka 20 andro indray, hivoaka ny rindrantsary manaraka nampitondraina ny lohateny « Mitsapepy », karazan-kira na gadona afrotrad izy ity. Hira mitantara ny fahasahiranana misy eto Madagasikara, amin’izao fotoana, ny « Mitsapepy ». Raha adika malalaka, very hevitra tsy mahita izay atao ny hevitry ny mitsapepy. Azo adika ihany koa amin’ny hoe tsy mahatombina.Fantatra fa natao tetsy amin’ny lalamby Ankorondrano ity rindrantsary ity. Nialana ilay nahazatra hatramin’izay, rehefa manao « clip » tahaka ny toerana na trano tsara tarehy satria ny zava-misy eo amin’io toerana io (lalamby Ankorondrano) mihitsy no manome aina ilay rindrantsary, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra. « Mitsapepy », mitantara ny fiainan’ireo olona miady mafy amin’ny fiainana.Nanangona : HaRy Razafindrakoto L’article Stephanie: « Clip » mialohan’ny fandehanana any ivelany a été récupéré chez Newsmada.
Fiverenana an-tsehatra. Ho an’ireo mpankafy Rock, tamin’ny taona 90, dia mahafantatra tsara ny tarika Martz. Rehefa nangingina nandritra ny fotoana elaela ny tarika dia hiverina an- tsehatra indray. Nisafidy ny etsy amin’ny Is’Art Galerie Ampasanimalo izy ireo, amin’ny 26 jolay ho avy izao. Hanolotra ilay mozika mavesatra ny Martz amin’ io fotoana io. L’article Mozika Rock est apparu en premier sur AoRaha.
Fahasahiranan’i sehatra tsy miankina :: Olona dimy arivo very asa tampoka eto an-drenivohitra
Miantraika mivantana sady mafy amin’ireo orinasa amin’ny sehatra tsy miankina ny fepetran’ny fihibohana eto Analamanga. Mitombo hatrany ny tarehimarika amin’ny fahaverezana asa, satria nanomboka afak’omaly, ohatra, dia orinasa telo eto an-drenivohitra no nisafidy nanakatom-baravarana. Fantatra fa manodidina ny dimy arivo ny isan’ny mpiasa naato ao amin’ireo orinasa ireo. Miezaka manohy ny asa arak’izay tratrany aloha ny ankamaroan’ireo orinasa tsy miakina, hatreto, araka ny tatitry ny Sendika kristianina Malagasy (Sekrima). « Tsikaritra, tamin’iny herinandro lasa iny, ny fanohizan’ny orinasa tsy miankina, amin’ny ankapobeny, ny asa isan’andro hatramin’ny 12 ora antoandro. Ifanarahan’ny mpiasa sy ny mpampiasa ny fandaminana. Orinasa roa no tonga tety aminay nanambara ny fikatonany. Tamin’ny alalan’ny peta-drindrina indray no namoahan’ny orinasa iray eny Ivato ny fiatoany hatramin’ny volana aogositra », hoy i Botoudi Rémi, sekretera jeneralin’ny Sekrima. Mananontanona tanteraka ny fiakaran’ny tahan’ny tsy an’asa raha hiitatra ny fampiharana an’ireo fepetra miantraika amin’ny asa aman-draharaha, ao anatin’izao ady amin’ny valanaretina Covid-19 izao. Etsy an-daniny dia mitaky hatrany ny fisian’ny paikady matotra isaky ny orinasa amin’ny fiarovana an’ireo mpiasa amin’ny valanaretina ry zareo ao amin’ny Sekrima. L’article Fahasahiranan’i sehatra tsy miankina :: Olona dimy arivo very asa tampoka eto an-drenivohitra est apparu en premier sur AoRaha.
Luk, Goth, Mahery: hamoha ny “Tsiahy an’i Sefo”
“Tsiaro an’i Sefo sy ny hiran’ny tamboho, vokatry ny fo”, hoy i Goth. Hanatanteraka cabaret etsy amin’ny Plazza Ampefiloha, ny zoma 25 septambra izao, amin’ny 7 ora sy sasany hariva, nampitondraina ny “Tsiahy an’i Sefo” izy telo mirahalahy, ahitana an’i Luk, i Goth ary i Mahery. Hamohafoha ireo hira tsy dia tadidin’ny olona intsony ry zalahy, amin’io fotoana io, izany hoe tsy dia mandeha amin’ny onjampeo firy, ankehitriny. Ao koa ny hira milamindamina Johary, izay tena nanamarika azy ireo. Amin’ny maha hiran’ny tamboho azy moa dia hovazoina ao ireo hiran’ireo andrarezina amin’ny tontolon’ny mozika, toy ny an-dry Njila, Lolo, Barijaona, Mahaleo, Tsiakoraka sy ny maro hafa, araka ny nambaran’i Goth. Hetsika karakarain’ny Canal7event izy ity, ary hisy ny sakafo sy tsakitsaky maro isan-karazany amin’izany. Manana ny maha izy azy eo amin’ny zavakanto malagasy izy telo lahy ireto noho ny tononkira tsara petraka sy ny feomanga ananan’ny tsirairay avy, anisan’izany ilay hira “ Mahazo malahelo”, izay niarahan’i Sefo sy i Luk.NarilalaL’article Luk, Goth, Mahery: hamoha ny “Tsiahy an’i Sefo” a été récupéré chez Newsmada.